Koonfur AFrica iyo Gudaha garoonka - BBC Somali - Cayaaraha
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 1 December, 2012, 21:36 GMT 00:36 SGA
Waa la martigalin karaa xaflad wanaagsan, balse Koonfur Africa sanadka 2013 ma noqon kartaa mid cayaar wanaagsan soo bandhigta? Dadka qaar waxaa u muuqda tartan la mid ah kii sanadkii 1996, oo South Africa ay martigalisay oo ay ku guulaysatay laba sano kaliya kadib markii doorashooyinka xorta ahaa ee dalka lagu caleemo saaray Nelson Mandela in uu noqdo madaxwaynaha Koonfur Africa.
Martigalinta koobka adduunka iyo hadda oo ay martigalinayso koobka Africa ayaa dad badan ay u arkaa mid ah fursad wayn, oo ah hirar ay kooxda dalka wiilasha Bafana Bafana ay u raaci karaan in ay ku gaaraan cayaarta kama dambaysta ah ee maalinta 10 Februay ka dhacaysa magaalada Johannesburg.
Dordon Igesund oo ku dhashay magaalada Durban, waa ninka loo xilsaaray in uu wax ka badalo koxdii u soo gudbi waysay cayaarihii koobka Africa ee sanadkii 2012 si gurigooda ay ugu soo hooyaan koob. Wuxuu ku guulaysatay ilaa afar koob oo ay qaadeen afar naadi oo kala duwan oo uu tababaray, wuxuuna haysta taageerada cayaartoyda.
Banny McCarthy, oo loo codeeyay cayaaryahankii tartankii koonka Africa ee sanadkii 1998 la qabtay ayaa wali wuxuu rajaynayaa in la xusuusta sanadka 2012. Waa Jose Mourinho-ga dalka Koonfur Africa, waa tababare mid la mid ah uu aad u yar yahay. Wuu garanayaa cayaaryanada uu doorto in mar walba ay ka soo baxayaan howshooda.
Maadaama aysan jirin tartamo xoog badan ayaa caqabad ku noqdo Igesund, oo Europe kormeer ku maray si uu u eego cayaaryahanada Koonfur Africa ee xiriirka qoys ku leh. Shantii cayaarood ee saaxiibtinimo ee Koonfur Africa yeelatay, waxaa ka badiyay Brazil, Poland iyo Zambia, waxaa iyaduna ay ka adkaatay kooxaha Mozambique iyo Kenya.
Waxaa hadda ay Koonfur Africa ku jirtaa kaalinta 84-aad ee qiimaynta Fifa ee kooxaha adduunka, waxaa ay hoos u dhacay ilaa 18 boos ilaa koobkii adduunka ee sanadkii 2010.
Phil Masinga, oo horay ugu guulaystay koobka qaramada Africa oo dhaliyay ilaa 18 gool oo caalami ah, wuxuu leeyahay kooxda hadda waa in ay casharo ka barataa 1996-dii kooxdii koobka qaadday. Markaas waxaanu ahayn qoys oo kale si ka badan kooxahaan. Tababaraheeda Clive Barker, wuxuu noo maamulo jiray sidii in aan walaalo nahay. Waan is ammaani jirnay midba kan kale. Waxaan garoonka u gali jirnay in aan guul soo hoyno inagoo kalsooni badan qabna. Waxaan lahayn hogaamiyayaal badan oo garoonka ku jira, sida Lucas Radebe iyo Doctor Khumalo oo gacan siinayay kantanka iyo tababaraha.